ကျွန်တော့်အကြောင်း | စွန်းထင်ခဲ့သော မင်စက်များ
အမည် ။ ။
ကောင်းမြတ်ထွန်း လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက ကောင်းကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်။
မွေးနေ့ ။ ။
၁၉၈၂ တတိယလ ၈ရက်မြောက်နေ့ တနင်္လာသားပါ။
မွေးရပ် ။ ။
မန္တလေးနန်းရှေ့  မှာမွေးပါတယ်။ မွေးတယ်ဆိုတာလောက်ပါပဲ။ နေတာကတော့ ရန်ကုန်မှာပါ။
ကွန်ပြူတာဘွဲ့ ကို KMD ကျောင်းကတဆင့် London Met ကရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ အဝေးသင်လဲ ရထားတယ်။
အလုပ်အကိုင် ။ ။
မြန်မာဒီစီအာ လို့ ခေါ်တဲ့ ကွန်ပြူတာစနစ်တည်ဆောက်ရေးကုမ္ပဏီမှာလုပ်ပါတယ်။ Delivery Manager ဆိုပါတော့။
တတ်ခဲ့တဲ့Stateကျောင်းတွေက ။ ။
မူကြိုကိုတော့ ရခိုင် စစ်တွေက ခရစ်ယာန် ကျောင်းနဲ့ ရန်ကုန်ရောက်တော့ ဒေါ်မေကြည်သိန်းစီမှာ တတ်ခဲ့တယ်။ သူငယ်တန်းကနေ ၆ တန်းအထိ အလက(၂) တောင်ဥက္ကလာမှာ တတ်တယ်။ ၇ တန်း နှစ်မှာ တောင်ကြီး အထက (၂) ကို သွားတတ်တယ်။ ပြီးတော့ ၈ တန်းကနေ ၁၀ တန်းအထိ ရန်ကုန်က အထက (၂) ကမာရွတ်မှာ တတ်တယ်။
တပိုင်တနိုင်သိတာလေးတွေက ။ ။
Framewrok ထဲမှာ Struts2, Struts1, Peer, Lucence, Smarty
Proprietary PL ထဲမှာ VB.Net, C#.Net, RPG, VBA
DB ထဲမှာ MySQL, MSSQL, DB2, Postgre,
Server ထဲမှာ AS400, MSS2003
ကျွန်တော့ နာမည်က ကောင်းမြတ်ထွန်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အီးမေးလ် လိပ်စာကတော့ kaunggyi@gmail.com ပါ။ သူငယ်ချင်းများက ကောင်းကြီးလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော့် ကို မန္တလေးမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က စစ်တွေမြို့ တွင် နေထိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ မူကြိုအရွယ်ဆိုပါတော့ လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီကမှ ကျောင်းနေအရွယ်ရောက်တော့ ရန်ကုန်ကို ရောက်လာပြီး ဒေါ်မေကြည်သိန်း မူကြိုတွင် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ငယ်ငယ် မူလတန်း၊ အလယ်တန်း တုန်းကတော့ အလက(၄) တောင်ဥက္ကလာမှာ ကျောင်းတတ်ပါတယ်။
တောင်ကြီးမြို့က အထက(၄) မှာတော့ ၇တန်းနှစ်မှာ တက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အဲဒီနောက်တော့ ရန်ကုန်ပြန်လာပြီး အထက (၂) ကမာရွတ်မှာ တတ်ရောက်ပြီး ၁၀ တန်းအောင်ခဲ့ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်တတ်တော့ ပထမဆုံး သန်လျင်မြို့က GTC မှာ electronic ဘာသာအဓိကနဲ့ တတ်ခဲ့သေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒုတိယနှစ်မှာ ကျောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတော့ ၂၀၀၂ခုနှစ်၁၀လပိုင်းက ဂျပန်ခဏဆိုပြီ သွားလိုက်တာ ၂နှစ်နဲ့ ၁၀ လလောက်ကြာသွားပါတယ်။ အလွန်ကို ပျော်စရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်မှာ ဂျပန်စာ သင်ရင်း အလုပ်လုပ်ရတာ အလွန်ပင်ပန်းပါတယ်။ အတွေ့အကြုံတွေလည်းရတာပေ့ါ။
၂၀၀၅ခုနှစ်၉လပိုင်းပြန်ရောက်ပြီး KMD Computer Center တွင် IDCS, IAD, BCIS အထိ တတ်ရောက် သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒဂုံတက္ကသိုလ် အဝေးသင် english အဓိကနဲ့ တတ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ ဘွဲ့ တွေလည်းရတော့ အလုပ်လုပ်ရပြီပေါ့ဗျာ။ လောလောဆယ် Myanmar DCR မှာ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ စ၀င်ဝင်ချင်းတုန်းကတော့ programmer ပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ Team Leader/ Project Leaderလုပ်ခဲ့ရတယ်။ အခုတော့ Delivery Manager အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါလည်း BSE(Bridge SE)ပေါ့။
၂၀၀၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ တုန်းက အလင်းစေတမန်(http://groups.google.com/group/a_lin_say_ta_mum )ဆိုတဲ့ google group တစ်ခု ကို စတင် လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
15 responses to “ကျွန်တော့်အကြောင်း”
February 14th, 2010 at 9:54 pm
you can use my post in ur site.
if i haveachance, i will write in your site.
i will be proud if i can writeapost in your site.
May 2nd, 2010 at 10:48 pm
May 3rd, 2010 at 12:27 am
ma san san aye
May 5th, 2010 at 5:48 pm
INN , YOUR LOOK IS QUIET CHEERFULLY AND FRIENDLY WHICH IS GOOD TO MAKE FRIEND,,,,,,I CAME AND VISIT IN YOUR SITE ,,,,,,,,,INN NOT BAD,,,,I CAN FEEL WHAT YOU TRY TO EXPOSE YOUR FEELING AND INTERESTING,,,,,,,,SO I HOPE WHATEVER YOUR OBJECTIVE BECOME TRUE. TAKEARE.
May 23rd, 2010 at 5:31 pm
May 29th, 2010 at 9:04 pm
အကို့ ကို ခင်မင်လေးစားတဲ့သူ တစ်ယောက်တိုးတယ်လို့ သဘောထားပေါ့ဗျာ။
အကို့ရဲ့ မေးလ်တွေကိုလဲ forward လုပ်မယ်နော်။အကို့ရဲ့ ဘလော့ခ် ပို့စ် ကနေပြန်မျှတယ်လို့ သဘောထားပေးပေါ့။
May 29th, 2010 at 9:56 pm
ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာ။ ခင်မင်မှုကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြန်လည်မျှဝေပေးတဲ့အတွက်ရောပါ။
November 22nd, 2010 at 6:46 pm
အချစ် အကြောင်းရေးသားထား သောစာများဖတ် လို့ ကောင်းပါတယ်။
ခံစားချက် အမှန်လား စိတ်ကူး ပုံဖော်ထားတာလား လို့ ဝေခွဲ မရအောင် ပင် လက်ရာမြောက်လှသည်။
အိုင်တီစာမျက်နှာ များကို ပါ တင်ထားသောကြောင့်ပညာ လည်းရသော ဘလော့တစ်ခုဟုထင်ပါသည်.။
အချိန်ကိုအကြိုးရှိစွာ အသုံးချ ခဲ့ ပုံ ကို ပါ ပြောပြစေချင်ပါ သည်.။
ဘာပဲပြောပြောအကို့ ဘလော့မှာအကုန်စုံအောင် ဖတ်လို့ကောင်းပါသည်။
March 23rd, 2011 at 11:11 pm
အလင်းစေတမန်ကို လုပ်တဲ့သူဆိုတာသိလို့ ကျေးဇူးပါဗျာ .
ဝမ်းသာစရာပါ .ပို့စ်ကောင်းတွေလည်း ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးပါ
ကိုကောင်းကြီး ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ .
October 16th, 2011 at 10:54 pm
I am glad to read your pages.
I also read ur post if I like pls allow to share ok
နောက်ဆုံး တင်ထားတဲ့ စာမျက်နှာများ
Trey Aschebeck on Advantages & Disadvantages of beingaprofessor
Aung Phyo Paing on Struts2Basic in Myanmar
KaungMyatTun(KaungGyi) on Struts2Basic in Myanmar
ajax Anniversary computer science eclipse IDE Internet and Me Just an article Living in Japan project management status struts2ကဗျာ ကျွန်တော်နှင့်.. ဘာသာရေး သွားပါများခရီးရောက် အချစ် အတွေးအခေါ် ရောက်တက်ရာရာ 日本
Internet and Me (2)
Just an article (4)
နိုဝင်ဘာပုလဲရဲ့  အချစ်စာမျက်နှာများ
Be fan of website!~
Be fan of writer!
October 12, 2009 လိုတရနှလုံးသား By KaungMyatTun(KaungGyi) သူငယ်ချင်းရေ တစ်နေ့က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မုန့်သွားစားရင်း… twitter.com/i/web/status/9… 17 hours ago
I likeda@YouTube video youtu.be/513PqQ4fVYE?a HOW TO TRAVEL MYANMAR - A Backpacking Documentary - Episode 4: MANDALAY to HSIPAW 1 day ago
HOW TO TRAVEL MYANMAR - A Backpacking Documentary - Episode 3: YANGON to BAGAN youtube.com/attribution_li… 1 day ago
HOW TO TRAVEL MYANMAR - A Backpacking Documentary - Episode2youtube.com/attribution_li… 1 day ago